दक्षिण कोरियामा निशुल्क सपिङ्ग गर्न पाईने मार्ट सन्चनलनमा ! – Korea Pati
May 9, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियामा निशुल्क सपिङ्ग गर्न पाईने मार्ट सन्चनलनमा !
अहिले विश्वभर म’हामारीका रुपमा फै’लिएको को’रोना भा’इरसले सबैको जीव न क’ष्टकर बनाइरहेको छ। तर कतिपय मानिसहरुलाई एकछा’क खान समेत नि’कै गा’ह्रो भइरहेको छ।
विहान वेलुका खान समेत धौ’ धौ’ परेकाहरुको स’हयोगका लागि दक्षिण कोरियाको राजधानी सउलको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको स्थानिय योङदैङ्पो जिल्लाको सरकारले भने त्यहाँ ३ वटा वि’शेष किसिमका स्टोरहरु सन्चालन गरेको छ।
ति स्टोरहरुमा त्यस जिल्लाका स्थानिय वासिन्दाहरुले फ्रि मा आफूलाई आ’वश्यक परेको खानेकुरा तथा अ’त्यावश्यक सामान पाउनेछन। यो स्टोरमा उनिहरुले एक पैसो पनि तिर्नुपर्दैन।
स्थानिय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको यि स्पेशल स्टोरको नाम ‘जिरो क’स्ट स्टोर’ दिइएको छ। नाम अनुसार यहाँबाट सामान किन्दा पैसा लाग्नेछैन। सउल योङदैङ्पो काउन्सिल अप सोसियल वेलफयेरले जानकारी दिएअनुसार यि स्टोरहरु गत जनवरी १८ तारिखबाट स’न्चालनमा आएका हुन।
को’रोना म’हामा’रीमा आफ्ना जनताहरुले विहान वेलुकी खान समेत गा’ह्रो पर्न थालेपछि स्थानिय सरकारले यस्तो जु’क्ति निकालेको हो। यस क्षेत्रका जो कोही जसलाई जिबन धा’न्न गा’ह्रो परिरहेको छ यस स्टोरमा आउन सक्नेछन। तर यो स्टोरबाट एक ब्यक्तिले महिनामा एकपटक देखि २ पटकसम्म मात्र प्रयोग गर्न पाउँदछ।
यदि कोहि मानिसलाई महिनामा दुइपटक फ्रिमा आवश्यक सामान लिँदा पनि जिवन धा’न्न गा’ह्रो परेमा स्टोरका कर्मचारीहरुले जिल्ला अफिसमा उनिहरुको अ’वस्था’ अव’गत गराई ‘थप स’हयोग गर्नेछन।
जिल्ला अफिसको सहयोगमा उनिहरुलाई लामो समय आ’वश्यक कुराको बन्दो’बस्त मिलाइदै आइएको छ। यि स्टोरमा आउँदा त्यहाँका नागरिकले आफ्नो परिचयपत्र साथमा लिएर आएमात्र पुग्छ। परिचयपत्र हेरि स्टोरका स्टाफले ति मानिस त्यहि क्षेत्रका हुन वा होइनन पlहिचान गर्नेछन।
फ्रि स्टोरबाट एक ब्यक्तिले मात्र एकपटकमा ४ चिज छानेर लैजान सक्नेछन। मार्टमा दैनिक जिवनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरु राखिएका छन। जसमा चामल, राम्यन, ट्वाइलेट पेपर, साबुन, सेम्पो, लत्ताकपडा इत्यादि छन।
आ’पतका बेलामा स्थानिय सरकारले आफूहरुलाई रा’हत दिएकोमा त्यस क्षेत्रका स्थानिय जनताहरु खुशी छन। सहयोगका लागि उनिहरुले स्थानिय सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका छन। (कोरिया हेराल्ड)
May 17, 2020 May 17, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने